Trasmend WiFi SD Card, ampio WiFi amin'ny fakantsarinao | Vaovao IPhone
Ny maodely fakantsary sasany dia efa nampiditra WiFi nandritra ny fotoana ela, na dia mahazatra aza raha miresaka momba ny fakantsary SLR isika dia mbola avo ihany ny vidiny. Ary koa, raha efa manana fakantsary tsara ianao, dia tsy heveriko ho mendrika ny manova ny maodely noho io antony io fotsiny. Soa ihany fa misy safidy mora vidy kokoa eny an-tsena izay manampy ity karazana fifandraisana ity amin'ny fakantsarinao, ary rehefa avy nikaroka betsaka aho dia nanapa-kevitra ny hanandrana ny Tratryend WiFi SD Card, iray amin'ireo soatoavina tsara indrindra amin'ny maodelim-bola hitako. Ny antsipiriany rehetra, etsy ambany.
1 Maninona no ampiana WiFi amin'ny fakantsary?
2 Sarany lafo amin'ny vola
4 Fanavaozana fanavaozana
Maninona no ampiana WiFi amin'ny fakantsary?
Azo antoka fa maro no afaka manome anao antony maro am-polony, raha ny amiko dia ny iray no tena fototr'izany: ny fahazoana mampiasa ireo sary nalaina tamin'ny fakantsary SLR mahazatra ahy avy amin'ny iPhone n'aiza n'aiza. Misaotra ny fampiharana misy ao amin'ny App Store (sy amin'ny Google Play) afaka mifandray amin'ny fakantsary ianao (raha ny marina amin'ny karatra SD) ary midira sary avy amin'ny iPhone na iPad-nao, ampidino ireo sary ao aminy, alefaso na ovay izy ireo, ary ampidino amin'ny solosainao aorian'izay raha tianao.
Mazava ho azy fa manana fidirana amin'ny tambajotra sosialy (Facebook, Twitter, Instagram…) ianao ary amin'ireo rafitra fitahirizana rahona (Dropbox, Google Drive, iCloud…). Ireo fitaovana rehetra misy amin'ny iPhone na iPad anao Hanana azy ireo amin'ny sarin'ny fakantsarinao SLR ianao, ary ny tsara indrindra amin'ny rehetra, na aiza na aiza misy anao.
Raha mijery izay tafiditra ao anaty fonosana isika, ny Trasmend WiFi SD Card dia misy vidiny mirary. Ho an'ny € 37 dia hanana karatra 10GB Class 16 SD sy mpamaky karatra USB SD / MicroSD ianaoHo fanampin'ny fifandraisana WiFi voalaza etsy ambony, izay tena ampahany lehibe amin'ny vokatra. Ny maodely hafa mitovy amin'izany dia manana vidiny izay mety hahatratra avo roa heny. Nahita ny vidiny tsara indrindra aho tany Amazon, azonao idirana mivantana izany fipihana eto.
Raha ny teôria dia tokony ho plug fotsiny sy hilalao fotsiny ny fanamboarana. Raha te-ho ara-drariny dia tsy maintsy lazaina fa ny fakantsariko dia tsy tafiditra ao amin'ny lisitry ny maodely mifanentana izay atolotry ny marika amin'ny tranokalany, izay azo inoana fa nandray anjara tamin'ny fahasahiranana sendra ahy tamin'ny voalohany. Na izany aza, dia fitsapana vitsivitsy monja izany mandra-pahitako ny lakileny ary niasa "saika" tanteraka ny zava-drehetra.
Hitako tamin'ny ankapobeny fa "maty" ny fakantsariko raha tsy hoe maka sary mavitrika ianao, noho izany ilaina ny mampandeha ny maody «Live View» mba hiasa hatrany ary noho izany ny karatra dia hamorona ny tamba-jotra WiFi. Vantany vao vita ilay tamba-jotra noforonin'ilay karatra, dia niseho tao amin'ny lisitry ny tamba-jotra misy ny iPhone ny "WIFISD" ary afaka nifandray taminy aho. EFA efa mifandray, mila mihazakazaka fotsiny ny fampiharana Trasmend ofisialy (Wi-Fi SD) ianao ary manaraka ny dingana fandaminana.
Avy amin'ny fampiharana dia azonao atao ny miditra amin'ny sary rehetra ao amin'ilay karatra, sintomy amin'ny iPhone na iPad anao ary Misaotra ny menio "Share" ao amin'ny iOS 8, alefaso amin'ny alàlan'ny WhatsApp, Telegram, Twitter, Dropbox ... na ampidino fotsiny ao anaty rool anao. Tanteraka ny tanjona.
Ny rindrambaiko dia tsy fahagagana famoronana, fa io no miasa. Kilema iray ihany, izay hamafisiko fa mety noho ny tsy fakan'ny fakantsariko: misy ny safidy hampifandray ny fakantsary amin'ny tamba-jotra WiFi an-trano ary noho izany dia tsy mila mampifandray ny iPhone na iPad-nao ary mampifandray azy ireo amin'ny tambajotran'ny fakantsary, fa izy rehetra dia mifandray amin'ny tambajotra iray ihany miaraka. Raha ny ahy dia tsy maintsy alamako isaky ny mandrehitra ny fakantsary aho, izay somary manelingelina ary farany tsy nampiasa izany aho.
Fahagagana iray hitako raha vantany vao nampifandray ny iPhone tamin'ny karatra nampiasa ny fampiharana iOS aho dia ny fampandrenesana fa misy firmware vaovao azo alaina ho an'ny karatra SD. Avy eo natomboka ny tahotro mafy indrindra, satria tsy dia tsara ny zavatra niainako tamin'ny fanavaozana ny firmware. Eny, ny mifanohitra amin'izay indrindra, satria manana fampiharana i Trasmend azonao atao ny misintona avy amin'ny tranokalan'izy ireo, mifanaraka amin'ny Windows sy Mac OS X (antsipiriany izay tsy mitranga matetika) sy izany nohavaozina ny firmware SD nataoko tao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fomba tena tsotra.
Karatra SD SD Trasmend
Hafaingam-panoratana sy famakiana
Ahitana adaptatera USB
Fametrahana tsy misy antony
Fifandraisana Internet mivantana tsy mahafa-po
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Trasmend WiFi SD Card, ampio WiFi amin'ny fakantsarinao
Fanontaniana iray, misy akony amin'ny batterie fakan-tsary amin'ny fomba ahoana na ahoana rehefa mampiasa wifi ny karatra?
AhombrAndrés avy any amin'ny toerana hafa dia mila misintona ny Herinaratra hiasa kely na be fiantohana izay misy fiatraikany amin'ny bateria. Fantatro fa hisy olona hahita fampiasana mahaliana ho an'io fa raha raisinay an-tsaina izay mazàna amin'ny fakan-tsary reflex dia miasa amin'ny vahaolana avo lenta ianao, mamindra 16 megabytes x sary ... Voalohany, mihinana ny fahatsiarovana iPhone ianao raha afindra izy ireo sy roa Ny wifi dia azo antoka fa hiasa mandritra ny fotoana lava ary noho izany dia raikitra fa misy fiatraikany amin'ny bateria. Salam, FRANK
Apple pay dia manampy banky 24 fanampiny ao amin'ny lisitra ao anatin'izany ny banky kely sasany
Mophie dia mandefa bateria izay hahatonga ny iPhone 6 tsy ho tantera-drano ary miaraka amin'ny bateria indroa